Markab Lo’ siday oo ku quusey Xeebaha dalka Cumaan – Radio Muqdisho
Markab Lo’ siday oo ku quusey Xeebaha dalka Cumaan
Markabkan oo si xad dhaaf ah loogu raray Lo’ ayaa ku quusey meel ku dhow xeebta Raas Al-Xadda koonfurta gobolka Sharqiya dalka Cumaan galabnimadii sabtiga.
Wararka laga heley ilo ku dhow Markabka ayaa sheegay in Markabka uu siday 350 Lo’ ah ,waxaana sababta Markabka uu u quusey lagu sheegay in badda xilligaasi ay ka jireen dabeylo xoogan isla markaana sababay mowjado Hirar ah.
Dhammaan Lo’dii Markabka saarneyd ayaa waxaa badbaadiyay dadka Xeebta Raas Al-Xadda, lamana soo sheegin wax khasaare dhimasho ah sida saraakiil ay ka soo xigatay Jariirada Times of Oman.
Dad goob joogiyaal ah ayaa sheegay in inta badan Lo’da ay u soo dabaalatay dhinaca xeebta isla markaana muuqaalka goobta uu ahaa mid la yaab leh.
Ilo wareedyo ayaa sheegay in uu ka yimid Soomaaliya ila markaana ku sii jeeday dalka isu tagga Imaaraadka Carabta, shaqaalaha Markabka ayaa waxaa ay badkood u dhasheen dalka Pakistan.
Arday loo soo gabo gabeeyay siminaar ku saabsan hal abuurnimada “SAWIRRO”
Wiil uu adeer u yahay Abwaan Hadraawi oo lagu diley Koonfur Afrika